Wednesday May 16, 2018 - 15:40:20 in Wararka by Super Admin
Inta badan muslimiinta caalamka kunool ayaa berri bilaabaya soomidda bisha Barakeysan ee Ramadaan sanadda 1439 Hijriya.
Dowlado badan oo caalamka islaamka katirsan ayaa xalay iclaamiyay in maanta oo Arbaco ah ay tahay 30-ka Shacbaan kadib markii ay bilan weysay bisha Ramadaan.
Wadanka Turkiga ayaa ah meesha kaliya ee muslimiinta lafaray in maanta ay soomaan, wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diinta Turkiga ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in maanta ay tahay Kowda Ramadaan.
Dowladda Turkiga waxay bayaankeeda ku caddeysay in aan la arag Bisha Ramadaan balse ay ku tiirsanaaneyso kalandarka Taariikhda Miilaadiga oo dhigaya in Kowad Ramadaan ay ku beegantahay 16,May, 2018.
Sidoo kale isla xalay ayay dowladda Turkiga iclaamisay munaasabadda Ciidul Fidriga oo ay ku sheegtay maalin Jimca ah 15 June 2018, waana tallaab banaanka soo dhigeyso sida dowladdaasi meel isaga dhigtay adeegsiga taariikhda Hijriga.
Dad badan ayaa la yaabay sida dowladda dabadhilifka Turkiga ugu ciyaareyso shacaa'irta islaamka iyadoo bisha Barakeysan masiirkeeda ku xirtay Taariikhda miilaadiga loogu yeero oo ah taariikh aan sal laheyn waxayna xukuumada Ankara meel iska dhigtay taariikhda Hijriga ee muslimiintu leeyihiin.